गुणस्तर को हानि बिना फोटो कसरी वृद्धि गर्न? केही सुझावहरू
त्यसैले, तपाईंले विस्तार गर्न चाहनुहुन्छ छवि छ। आजकल, इच्छित परिणाम हासिल गर्न धेरै तरिका छन्। तर तस्विर गुणस्तर को हानि बिना कसरी विस्तार गर्न सोच, यो आवश्यक तिनीहरू अझै पनि छ बलिदानको भनेर बुझ्न छ। कुनै पनि artificially बढेको छवि सिद्ध रूपमा फैलयो हेर हुनेछ। तसर्थ, हाम्रो प्राथमिक लक्ष्य - एक न्यूनतम गुणस्तर हानि कम गर्न।
मानक उपकरण Adobe Photoshop प्रयोग गरेर
सायद कुनै फोटो सम्पादक लोकप्रियता र प्रभावशाली कार्यक्षमता मा यो कार्यक्रम संग छैन तुलना गर्न सकिन्छ। त्यसैले पहिलो कुरा हामी "Photoshop" को प्रयोग गरेर गुणस्तर हानि बिना फोटो कसरी बृद्धि गर्न देखो।
अन्तिम परिणाम प्रारम्भिक छवि गुणस्तर, साथै यसको स्वरूप मा निर्भर गर्दछ। यस सन्दर्भमा एक आदर्श विकल्प RAW ढाँचा मानिन्छ।
धेरै डिजाइनर प्रयोग मुख्य चाल, - छविमा एक क्रमिक वृद्धि। यो केवल 10% द्वारा ठूलो तस्विर गुणस्तर देखिने हानि बिना सम्भव छ भनेर विश्वास गरिएको छ। > "आकार" - त्यसैले, तपाईं पहिलो "छवि" चयन गर्नुपर्छ। को खोलियो सञ्झ्यालमा अर्को "अन्तर्वेशन" गर्न चेक मार्क हटाउन र 300 पिक्सेल / इन्च गर्न संकल्प परिवर्तन। हामी परिवर्तन स्वीकार ( "ठीक") र रिसाइज विन्डो पुन: खोल्न। रिजोल्युसन खोल्दै (ठाउँमा फिर्ती चेक), र थप 10% द्वारा छवि बढ्छ। यो गर्न, एक प्रतिशतको रूपमा चौडाई तथा उचाइ परिमार्जन गर्न चयन, र त्यसपछि दुवै क्षेत्रहरू मा मान प्रविष्ट गर्नुहोस् 110 (100% - 10% द्वारा छवि को मूल आकार, जुन हामीले यसलाई वृद्धि गर्न)। राम्रो वृद्धि गर्न मा मा bicubic अन्तर्वेशन चयन गर्न सक्नुहुन्छ ड्रप-डाउन सूची। यी कदम दोहरो, तपाईं बिस्तारै फोटो मा वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ। चौरसाई र विभिन्न साइटहरू, केही तत्व थप रेखाचित्र मा sharpening - तथापि, तपाईं आफ्नो retouching पालना गर्न आवश्यक पर्दछ भनेर याद गर्नुहोस्। छवि परिवर्तन गरिएको छ ठूलो, अधिक कठिन यो ठीक हुनेछ।
सिद्धान्त कसरी गुणस्तर को हानि बिना फोटो बृद्धि गर्न को यस्तो विधि, धेरै सरल छ, र सबै भन्दा अवस्थामा परिणाम एकदम सन्तोषजनक छ। तर Photoshop पोख्त जो छैन ती के, निश्चित उहाँले बढेको समायोजन सक्छ र छविको केही विकृति भइरहेको छ?
नियम, कसरी फोटो, गुणस्तर को हानि बिना वृद्धि गर्न को लागि भुक्तानी गर्न तरिकाहरू देख रहे गर्नेहरूका लागि उपयोगी छन् कि सबै भन्दा साँच्चै प्रभावकारी कार्यक्रम रूपमा। र लाइसेन्स संस्करणहरू यति सानो हो। तसर्थ, यो केवल अक्सर तस्बिरहरू को आकार परिवर्तन गर्न आवश्यकता संग सामना गर्दै छन् गर्नेहरूलाई तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न अर्थमा बनाउँछ - व्यावसायिक फोटोग्राफर, डिजाइनर, आदि अब हामी तिनीहरूलाई केही कुरा हुनेछ ...
1 Imagener। (29,95 $, 49,95 $ र $ 99,95, क्रमशः) सुधारिएको, व्यावसायिक र असीमित: विकासकर्तालाई तीन संस्करण Imagener प्रदान गरेका छौं। कार्यक्रम धेरै लोकप्रिय काम गर्छ छवि स्वरूप, PCX, PSD, र आदि सहित बौद्धिक आवेदन मोड्युल वृद्धि गर्न प्रत्येक पिक्सेल मा स्पेस उच्चतम गुणस्तरको थियो विश्लेषण। गुणस्तर को सजिलै देखिने हानि बिना Imagener तस्बिरहरू संग 2-3 पटक वृद्धि गर्न सकिन्छ। को व्यावसायिक संस्करण, यी तथ्याङ्कले पनि उच्च। एक Imagener असीमित इच्छित आकार तिनीहरूलाई फैलिएको र फेरि एक बिटमैप अनुवाद, पहिलो सदिश वस्तुहरु गर्न रेखापुंज परिवर्तन रूपमा, को बढेको छविको अधिकतम गुणस्तर हासिल गर्न अनुमति दिन्छ।
2. PhotoZoom व्यावसायिक। कसरी गुणस्तर गुमाउने बिना मूर्तिको आकार वृद्धि गर्न खोजिरहेको गर्नेहरूलाई उपयोगी हुन सक्छ कि अर्को कार्यक्रम। यो अनुप्रयोग को लागत 129 यूरो छ। मानक सम्पादक देखि PhotoZoom अद्वितीय प्रविधि प्रयोग यस्ता दांतेदार किनारों र defocusing यो दोष को वृद्धि संग को छुटकारा प्राप्त गर्न सम्भव बनाउँछ अनुकूली अन्तर्वेशन एस-तख्ता, मा विशेषता।
3. Qimage। यो कार्यक्रम खर्च $ 45 जो पछि मुद्रण enlargements आवश्यक ती चासोको विषय हुनेछ। हामी थाह छ, मुद्रित गरिने छवि र फोटो गुणस्तर मामलामा पनि उच्च आवश्यकताहरू पूरा गर्नै पर्छ। विकासकर्तालाई परम्परागत bicubic अन्तर्वेशन भन्दा धेरै चलाख र थप कुशलतापूर्वक छन् कि नयाँ Qimage वृद्धि एल्गोरिदम गरे किन कि छ।
4 आईटी पुन: आकार। यो स्ट्यान्ड कार्यक्रम र कुन तस्बिरहरू enlarging प्रक्रिया सुधार गर्न अनुमति दिन्छ "Photoshop", को लागि एक प्लगइन छैन। हरेक समय यो प्रयोगकर्ता जो तपाईंले प्रत्येक मामलामा सबै भन्दा राम्रो परिणाम दिन्छ कि एक चयन गर्न सक्नुहुन्छ धेरै अन्तर्वेशन एल्गोरिदम को एक विकल्प प्रदान गर्दछ। आईटी दर्ता आवश्यक पुन: आकार अघि, हामी 15 तस्बिरहरू tentatively प्रक्रिया गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईं गुणवत्ता को हानि बिना फोटो वृद्धि यदि तपाईं एक पटक मात्र सुरक्षित आवेदन स्थापना गर्न आवश्यक छ।
अनलाइन सम्पादक र फ्रीवेयर
निस्सन्देह, सेवाहरू सबै फोटो मुक्त छैनन् वृद्धि गर्न छैन। निःशुल्क डाउनलोड लागि उपलब्ध छन् कि ती तिनीहरूलाई बीच छन्। कि अभ्यास उत्पादन को छवि गुणस्तर हामी मानक Photoshop उपकरण प्रयोग गरेर प्राप्त कि फरक छैन भनेर देखाउँछ बस हो। संग परीक्षण छैन र भुक्तानी कार्यक्रम को संस्करण ह्याक - यी मोहक प्रस्ताव अधिकांश भाइरस को खतरा को रूप मा आफ्नो कम्प्युटर ले गर्न सक्नुहुन्छ।
म ओपेरा को इतिहास कसरी मेट्ने गर्छन् र आवश्यक गोपनीयता सुनिश्चित गर्न?
Hashtab: यो कार्यक्रम के हो र यो किन आवश्यक छ
घरमा टोपी मार्फत जोड दिंदै
बच्चाहरु पिंडली बीफ व्यञ्जनहरु
क्याम्ब्रिज (इङ्गल्याण्ड) को शहर: इतिहास, ठाँउहरु, रोचक तथ्य
राज्य, यसको संकेत को घटना को सामान्य ढाँचाहरू
आलु संग फ्रेंच मासु खाना पकाउने
देशमा एक तालाब सिर्जना गर्नुहोस्
उत्कृष्ट रंग "विद्युत"। मौसम को नयाँ प्रवृत्ति
रगत थक्के: को संयन्त्र को एक लक्षण र कारण। उपचार